VAMWE Vagadziri uye Vatengesi - China VAMWE Fekitori
Bonovo Grab Bucket ibhakira rakasimba kwazvo, rakavakwa zvakanyanya riine 'chigunwe' chakakwaniriswa kune mamwe mabasa. Iyo ipfungwa yakanyanyisa, iri pamberi pechimwe chigadzirwa pamusika, sezvo ichibvumidza mushandisi kutora zvinhu uye achingofamba mukati mezere nzvimbo yekutsikirirana kweyekuchera.
Wedzera kuita kwakasiyana-siyana kune chako chekuchera nechigumwe chezvinhu zvakasiyana siyana zvekubata zvinhu senge saiti yekugadzirira, marara marara, kuputsa uye kutema mashandisirwo.
Thumb Bucket rakasarudzika dhizaini yeBONOVO inopa yakasimba kugadzirwa chigunwe chinokodzera ese mamodheru ezvekuchera. inoshanda mushe nezvose zvinokurumidza kubatanidza, inogadzira ekuchinja mabhaketi & zvimwe zvekubatisa mhepo.